भेटियो युवतीको शव, ह त्या भन्दै आफन्तले गरे प्रदर्शन, श्रीमान् पक्राउ.. – Sandes Post
भेटियो युवतीको शव, ह त्या भन्दै आफन्तले गरे प्रदर्शन, श्रीमान् पक्राउ..
April 15, 2022 318
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा एक युवतीको रहस्यमय तरिकाबाट मृत्यु भएको खबर बाहिरिएको छ । २९ वर्षीया अमृता खत्री वि’ष से’व’नबाट मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ । अमृताको श्रीमान्‌ले नै ह’त्या ग’रे’को माइती पक्षले दाबी गरेका छन ।
बुधबार तिलोत्तमाको जानकीनगरमै माइती घरमा रहेकी अमृतालाई श्रीमान् प्रेम टण्डनले पटक पटक फोन गरेर घरमा बोलाएको एक घण्टानबित्दै उनको मृत्यु भएको माइती पक्षको भनाइ छ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका-२ भेटनरी लाइनमा २९ वर्षीय युवतीको शंकास्पद मृत्यु भएको भन्दै माइती पक्षले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बुधबार राति करिब पौने १० बजे विष सेवन गरेको अवस्थामा भेटिएकी २९ वर्षीया अमृता टण्डनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
अमृतालाई परिवारकै सदस्यले ह’त्या ग’रे’र छिमेक र प्रहरी कसैलाई खबर नगरी वि’ष से’व’न ग’रेको बहाना बनाइ उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुर्‍याएको माइती पक्षको आरोप छ । गत भदौमा पटकपटक यातना पाएपछि कार्यालयमा निवेदन दिएपछि आइन्दा मिलेर बस्ने सहमति भएको थियो । उनीहरुको ५ बर्षीय एक छोरा पनि छ ।
मृतकका दाजु पुष्पक खत्रीका अनुसार अमृताले बुधबार राति ९ बजेर ३२ मिनटमा अनिताले दाजु पुष्पकलाई बचाउन र घरबाट निकाल्न अपिल गर्दै म्यासेज लेखेकी थिइन् । म्यासेज आएपछि माइती पक्ष सोधखोजमा लाग्दै थिए । तर, उनको मोबाइल अफ थियो । करिब १० बजेर १५ मिनेटपछि श्रीमान प्रेमले बिरामी भएको भन्दै मईती पक्षलाई अस्पतालमा बोलाएका थिए । यहि आधारमा माईति पक्षले अमृताको श्रीमान्‌ले नै ह’त्या ग’रे’को माइती पक्षले दाबी गरेका हुन् ।
Prevगरिब देशका धनी नेपाली, जसको सवारीका लागि भित्रिएका छन् सवा ११ करोडसम्मका गाडी, कसले चढ्छ!
Nextबढ्यो सुनको मूल्य, प्रति तोला कति पुग्यो ?
शून्य लागतमा मलेसिया रोजगार, ओभरटाइमको सुविधा सहित यति तलब..
मलेसियामा श्रमिकले यो नियम उलंघन गर्नेलाई RM १० लाख जरिवाना गर्ने
टिकटकमा भाइरल सासु ज्वाइँ आए मिडियामा,नाचेर नै यस्तो भाइरल भए (भिडियो हेर्नुस्)
आजबाट देशभर ग्यास, पेट्रोल र डिजेलको बिक्रि बितरण बन्द, पेट्रोल पम्पमा लाइन सुरु